पेटको समस्यामा नजँचाई औषधि नखानुहोस् | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली पेटको समस्यामा नजँचाई औषधि नखानुहोस्
on: १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १०:१८ स्वास्थ्य र जीवनशैली
किङ्ग एडवार्ड मेडिकल कलेज, पाकिस्तानबाट एमडी गरेका डा. सन्दीपराज कुँवर सिनियर ग्याष्ट्रोलोजिष्ट हुन् । उनी दैनिक २५–३० जना पेटका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन् । बिरामीले पेटको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिने र आफ्नै लापरबाही तथा जथाभावी औषधि सेवनले यस्तो समस्या हुने गरेको उनको ठम्याइ छ । पछिल्ला अध्ययन र सरकारी तथ्याङ्कहरूले पनि पेटका रोगी बढेको देखाउँछन् । यसै सन्दर्भमा पेटमा हुने समस्या, रोकथाम, उपचारलगायत विषयमा डा. कुँवरसँग आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :
पेटको समस्या किन हुन्छ ?
आहार–विहारमा ध्यान नदिने, समयमा खाना नखाने, खाएको खाना स्वस्थ÷सन्तुलित नहुने, शरीरलाई चाहिने तŒवको असन्तुलन लगायत कारण पाचन प्रणालीमा असर पर्छ । यसबाट पेटसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन्छ । त्यसैगरी, बढी चिल्लो र नपकाएका खानेकुरा बढी खाँदा पनि पेटमा खराबी हुन्छ ।
पेटमा हुने मुख्य समस्या के के हुन् ?
पेटमा मुख्यतया तीन किसिमको समस्या हुन्छ । पहिलो ग्यासट्राइटिस हो । ग्यासट्राइटिस भएका बिरामीको आमाशय सुनिन्छ । तारेको/झानेको र धेरै तेल/घ्यू हालेको खानेकुरा लगातार खाने मानिसको आमाशय सुनिन्छ र पाचन प्रणाली कमजोर हुन्छ ।
दोस्रो, पित्तथैलीमा पत्थरी हुनु हो । मुख्यगरी ४० वर्ष पुगेका मोटा महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ । र, अर्काे प्याङ्क्रियाटाइटिस हो । प्याङ्क्रियाटाइटिस भएका बिरामीको अग्न्याशयमा समस्या देखिन्छ । अधिक रक्सी पिउने, धूमपान गर्ने र अन्य व्यक्तिमा समेत यो समस्या देखिन सक्छ ।
उल्लिखित पेटको समस्या भएका बिरामीलाई पेट पोल्ने, घोच्ने, दुख्ने, बान्ता आउने, पटकपटक दिशा गइरहनुपर्ने, कब्जियत हुने, मुखबाट अमिलो पानी आउने, दिशामा रगत बग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यस्ता लक्षण भएकाले बिरामीले आफ्नै विवेकले मनलाग्दी औषधि सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसको अर्थ समस्याअनुसार उपचारको प्रयास भएन भन्ने हो ?
हो । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीमा डिसपेप्सिया भएको देखिन्छ । त्यो भनेको धेरै किसिमको समस्याको एकैखाले लक्षण हो । प्याङ्क्रियाज, ग्यासट्राइटिस वा पित्तथैलीमा पत्थरी हुँदा बिरामीमा लगभग उस्तै–उस्तै लक्षण देखिन्छ । त्यसैले, बिरामी आफैले सबैखाले समस्यालाई ग्याष्ट्रिक भन्ने ठान्छन् ।
प्याङ्क्रियाज भनेको के हो ?
‘प्याङ्क्रियाज’ अर्थात् अग्न्याशय मानव शरीरको मांसपेशीको अङ्ग हो । यो १२/१५ सेमी लामो अङ्ग्रेजी अक्षर ‘जे’ आकारको हुन्छ । यो पेटको खाली भागमा हुन्छ । यसको टाउको, मध्य भाग, टाउको तलको अर्को भाग (अन्सिनेट) र पुच्छर हुन्छ । यसको टाउको अर्थात् माथिल्लो भाग हाम्रो पेटको अर्को महŒवपूर्ण अङ्ग ‘सी’ आकारको ड्युडेनमसँग जोडिएको हुन्छ ।
यसमा हुने मुख्य र सहायक नलीबाट पाचन रस निस्कन्छ, जसले खानेकुरामा रहेको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ पचाउने काम गर्छ । अग्न्याशयले इन्सुलिन उत्पादन गर्ने काम पनि गर्छ । उक्त इन्सुलिनले रगतमा सुगरको मात्रा नियमित गर्छ ।
प्याङ्क्रियाज किन सुनिन्छ ?
प्याङ्क्रियाज सुन्निनु वा सङ्क्रमण हुनुलाई प्याङ्क्रियाटाइटिस भनिन्छ । शरीरमा उत्पन्न विकृतिले अग्न्याशयका कोषिकालाई नै पचाउने गर्छ । बारम्बार यस्तो भयो भने अग्न्याशय ग्रन्थीको स्वरूप बिग्रन्छ र त्यसको कार्यक्षमता नष्ट हुन्छ । त्यसैलाई अग्न्याशयको सुजन भनिन्छ ।
प्याङ्क्रियाटाइटिस हुनुको कारण के हो ?
सूर्ती सेवन, धूमपान, लगातार मद्यपान र पित्तथैलीको पत्थरीले यो समस्या हुन्छ । रगतमा बोसो र क्याल्सियमको मात्रा बढ्नुका साथै पाराथाइराइड ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने रस बढी भएर पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । कतिपय बेलामा प्याङ्क्रियाटाइटिस कुपोषण, मधुमेह र अग्न्याशयको क्यान्सरको कारक हुन्छ । यो समस्या भएका करीब ४० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
यस्ता समस्याको कारण के हो ?
आमाशय सुन्निने कारण हेलिकोब्याक्टापाइलारी भन्ने ब्याक्टेरिया हो । यो आमाशयको भित्र लामो समयसम्म सुरक्षित रहन सक्छ र मानव स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ । ग्याष्ट्रिक भन्दै उपचारका लागि अस्पताल आइपुग्ने ७० देखि ८० प्रतिशत बिरामी एच–पाइलारीकै कारण समस्यामा परेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
पेटका कस्ता समस्या भएका बिरामी अस्पताल आउँछन् ?
लामो समयसम्म दुखाइ सहेका, थरीथरीका औषधि सेवन गरेका, विभिन्न किसिमको परीक्षण गराएका बिरामी सबै उपाय गरेर थाकेपछि अन्तिममा चिकित्सककोमा आउँछन् । म दैनिक यस्तै समस्या भएका २५–३० बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु । पेटमा आज वा अहिलेदेखि पीडा शुरू भयो र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएको भन्ने त हुँदै हुँदैनन् । ग्याष्ट्रिक भयो, यस्तो–उस्तो उपाय गरेँ भन्ने बिरामी धेरै हुन्छन् ।
यस्तो समस्याको उपचार विधि के हो त ?
समस्या आउनुभन्दा आउन नदिनु उत्तम उपाय हो । सकेसम्म आहार–विहारको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष शारीरिक व्यायाम हो । दिनचर्याबाट केही समय निकालेर व्यायाम वा योग गर्ने गरेमा पनि धेरै हदसम्म स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ ।
पेटको रोग भिडियो एक्स–रे, इण्डोस्कोपिक, अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि पत्ता लाग्छ । औषधोपचारबाटै यो समस्या समाधान हुन्छ । पेट दुख्यो भनेर दुखाइ कम गर्ने औषधि जथाभावी खाने गर्दा थप समस्यामा परिन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । कुनै बेला बिरामीको रोग सोचेको भन्दा खतरनाक हुन सक्छ ।
आम सर्वसाधारणलाई भन्नुपर्ने केही छ ?
पेटको माथिल्लो भाग ग्याष्ट्रिककै कारण मात्रै दुख्दैन । त्यसैले, पेट दुख्यो, समस्या आयो भने बेलैमा विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ । समयमै उचित निदान भेटिए स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र जीवन सहज बन्छ । हाल प्याङ्क्रियाटाइटिस र त्यसबाट अग्न्याशयको जीर्ण रोगतर्फ उन्मुख सयौं बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् । त्यसैले, रोग लाग्यो भन्दैमा आत्तिहाल्नुभन्दा पनि के कस्तो कारण भएको हो, त्यो पत्ता लगाएमा उपचार सहजै सम्भव हुन्छ ।